akpaka ice igbe kuki iji kuki Ndinam igwe
The e kuki nwere ike ahaziri na ụdị imewe. O yiri ọtụtụ ụzọ na-eme ka kuki, ụfọdụ obere ụlọ ahịa na nwunye na-eme ka nri site n'aka, o nwere a ịtụnanya price na dị iche iche afọ ndị mmadụ dị ka nke a nri.
model nọmba BK-280
ike 5000-6000pcs / h
Product ibu 5-200g / pc
Etiti oge N'ime 7 arụ ọrụ ụbọchị ma ọ bụrụ na 1 set igwe
Machine ibu 400kg
1) Protection ekpuchi na Emergency Kwụsị bọtịnụ maka mma ọrụ.
2) arọ, size na jikọrọ ọnụ-ndochi-ruru nwere ike ịgbanwe conveniently dị ka chọrọ.
3) Multipurpose: na-arụ ọrụ na-emepụta ụdị dị iche iche nke nri site na-agbanwe agbanwe Ebu nanị.
4) Big ikike
5) ọtụtụ ụdị kuki Ebu nwere ike e.
6) ahaziri igwe, anyị nwere ike tinye ụfọdụ igwe usoro na igwe.
7) English, Chinese, Arabic asụsụ ndị nhọrọ ..
8) free ọzụzụ ga-awa mgbe ahịa testing igwe.
Previous: akpaka ụbọchị mmanya mkpụrụ mmanya Ndinam igwe
Next: Automatic kpara akpa kuki Ndinam igwe
Automatic Kuki Ime Machine
Chocolate Jupụta Kuki Machine
Kuki Encrusting Machine
kuki Igbo Machine
Kuki Ime Machine
E Kuki Machine
Jupụta Kuki Machine
Obere kuki Encrusting Machine
Obere Kuki Machine
Obere Ugboro abụọ Igbo kuki Machine
Obere Jupụta Kuki Machine
Obere Igbo kuki Encrusting Machine
Waya cutter Kuki Machine
Automatic Scotch egg siri ike ndochi encrusting m ...